SAMOTALIS: GUDDOOMIYAHA GUDDIGA DHAQAALAHA WAKIILLADA OO JAWAAB ADAG KA BIXIYAY LACAG WASAARADDA DUULISTU KU SOO ROGTAY RAKAABKA
GUDDOOMIYAHA GUDDIGA DHAQAALAHA WAKIILLADA OO JAWAAB ADAG KA BIXIYAY LACAG WASAARADDA DUULISTU KU SOO ROGTAY RAKAABKA
Hargaysa(CNN)Guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha Golaha Wakiillada Somaliland Maxamed Xaaji Maxamuud Cumar Xaashi ayaa si addag u naqdiyay lacag toban
Dollar ah oo Wasaasradda Duulistu ku soo rogtay rakaabka ka dhoofaya madaaradda dalka. Islamarkaana, waxaa uu tilmaamay in uu saaka arrintaas kalla xidhiidhayo oo uu u tagayo Wasaaradda duulista.
Qoraal uu agaasimaha wasaaradda duulista iyo hawada Md. Axmed Dalal Faarax, 7/7/2012. u kala diray shirkadaha dhiyaaradaha, ayaa wuxuu ku sheegay in lacagta tobanka doolar ah ee ay soo rogeen aanay ahayn cashuur dawladeed balse ay tahay lacag loogu tallo galay shaqaalaha qalabkaas iyo dayactirkiisa. “Qoraalkani waa sharci darro, Cashuur aan la soo marrin Golaha Wakiillada dadka shacabka ah lagama qaadi karro,. Waana sharci darro lacagtan wasaaradda duulistu ku amartay inay shirkaddaha diyaaraduhu uga qaadaan dadka.” Sidaas waxaa yidhi Guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee Golaha Wakiilladda oo aanu arrintan wax ka weydiinay, waxaana uu intaas ku daray, isaga oo ka hadlaya qodobkan in haddii laan ka mid ah waaxyaha dawladdu ka maarmi weydo inay soo rogto oo dadka ka qaado lacag ay waajib tahay inay marka hore Golaha Baarlamaanka soo mariso. “Dadka waxaan leeyahay ha bixinina, Arroorta (Saaka) ayaanan tagayaa Wasaaradda.” Ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Dhaqaalahan la saaray dadka rakaabka ah ayaa shirkaddaha diyaaradaha laftoodu si weyn uga fajaceen, islamarkaana qaarkood ku sifeeyeen arrin aan dadku qaadi karrin. Golaha wakiilada ayaa hore wasaaradda duulista iyo hawada ugu ansixiyay lacag dhan $ 3 (Saddex Dollar), oo laga qaado dadka dhoofaya iyo kuwa soo degaya, waxaanay wasaaradu wakhtigaas sheegtay in lacagtaas lagu dabooli doono baahiyo ay ka mid yihiin nadaafadda, dayactirka dhismayaasha, dayactirka dhabada garoomada, sugidda ammaanka, xoolo celinta, dhiraynta garoomada iyo qalabaynta iyo qurxinta madaarada. “Saddexda doolar ee aanu gole ahaan hore ugu ansixinay, waxaa loogu tala-galay adeegyadda hoose iyo wax ka qabashadda baahiyaadka madaaradda, laakiin, tani waa dheeraad.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha guddiga dhaqaaluhu
Labels: ECONOMY, GOVERNANCE, Somaliland